Leader Price: misokatra ny tranombarotra etsy Antaninarenina | NewsMada
Leader Price: misokatra ny tranombarotra etsy Antaninarenina
Par Taratra sur 15/10/2018
Nisokatra ho an’ny daholobe, nanomboka ny alarobia 3 oktobra teo, ny tranombarotra lehibe Leader Price etsy Antaninarenina. Afovoan-toerana eto an-dRenivohitra, sahaza ny mpanjifa, faritra miroborobo amin’ny fandraharahana.
Toeram-pivarotana fahadimy eto Antananarivo Renivohitra (Ankadimbahoaka, Andranomena, Ankorondrano, Ambatobe ary Antaninarenina) ity ary fahafito eto Madagasikara, hita any Mahajanga sy any Toamasina. Tanjona ny hanakaikezana hatrany ny mpanjifa ary mitovy avokoa ny tolotra hita manerana ireo magazay rehetra. Ahitana entana sy kojakoja, sakafo vao sy am-bifotsy, hena isan-karazany, mifomamy, sns. Eo koa ny toeram-pisakafoana Daily Leader, hanome fahafaham-po ny mpiasa miasa eny Antaninarenina sy ny manodidina. Misokatra manomboka amin’ny 7 ora maraina, hisakafoana maraina mialoha ny hidirana miasa, sy ny antoandro.
Mampiavaka ny tranombarotra Leader Price koa ny tolotra “Drive”, ahafahana mividy entana amin’ny alalan’ny “internet”. Afaka manao ny famandrihana ao amin’ny site: www.leaderprice.mg ary arahina ny toromarika omeny ao. Manampy ireo, azo atao koa ny manao ny famandrihana mofomamy isan-karazany.